Kungasebenti kuphela ezikhulayo yonke indawo, ngakho ukuthola umsebenzi siya unamandla amakhulu. Yingakho abantu abaningi abakhetha ukukhokha ekhaya, kodwa hhayi wonke umuntu angakwazi ukuhlela imvelo ezifana ukusebenza. Yingakho kufanele ufunde lesi sihloko ukuze usize ujike umcabango imali yangempela. Ukuze wenze lokhu, akudingeki ukuba ungungqondongqondo, kungaba izikhangiso kwanele ukuba wazi ngendlela eyiyo yokusebenza. Yini amakhono wakho esiqine? Ongakwenza ukuthengisa kumakhasimende angaba namandla? Ingabe lokhu ifenisha noma ulwazi lwakho ubudala?
Faka i-oda yakho futhi ukunciphisa inani izinto: ukuthengisa izinto ezingadingekile
Ngaphambi ngempela sibhukule yethu futhi baqala ukwenza imali amakhono akho, kungani engalethi ngokulandelana ekuphileni kwakhe? Yamadivayisi izinto ezingadingekile - indlela enhle kakhulu ashanele futhi wenze udoti, kodwa le ndlela futhi kwenza imali. Uma uya ukwenza ikhaya lakho umsebenzi ehhovisi lakho, lokhu imali eyengeziwe kancane angakunika isabelomali ezinhle kuyaqala ukuthi kuzokuvumela ukuba uqaphele izinhlelo zakho ukusebenza ekhaya. Futhi-ke ingakusiza ngokusebenzisa izikhathi ezinzima lapho ungeke ube oda. Kufanele sicabangele zonke izinketho.
lokubhala ezizimele: ukuthengisa amazwi akho
Kufanele uqale neqiniso lokuthi abaningi kakade kahle. Ngaphambili, ngokubhala ezizimele kwaba umkhakha kunalokho unpromising, njengoba kwakunjalo kudingekile ukuba ngithume imisebenzi yabo omagazini ehlukahlukene kanye namaphephandaba, bese ulinda amaviki impendulo esuka abahleli. Nokho, ezweni lanamuhla ishintshile sibonga kwi-Inthanethi. Namuhla, unganquma ukuthi ube umbhali ezizimele, futhi uma lucky ngokwanele ukuze uthole oda kuqala ngosuku olufanayo. Ngokwemvelo, lokhu kusho amakhono akho lokubhala kangcono, futhi uba nokuningi nakho kulo mkhakha, oda ezimbi nakakhulu futhi emi uzothola.
Izifundo: ukuthengisa ulwazi lwakho
Enye indlela ukwenza imali ekhaya - kuba ukudayiswa amakhono abo siqu kanye nolwazi, okungukuthi, siqhuba izifundo. Ngokwesibonelo, uma abanolwazi olunzulu ngezinto umsebenzi, ungakwazi ukugcina umsebenzi ngokomzimba egumbini elikhulu futhi ivulekile kakhulu ekhaya lakho. Abantu abazimisele yokuyikhokhela ukuthola ulwazi kusuka emikhakheni eminingi yolwazi, ezisukela ukupheka nokutshala yokukhiqiza insipho noma amakhandlela. Ukudlala insimbi yomculo, ukuthatha ukulethwa, ukudansa, inja, i-yoga, futhi ngisho izilimi zakwamanye amazwe - bonke laba bantu ukudla kuyoba ukulikhokhela wena.
Umoya Wokungenisa Izihambi: ukuthengisa izihlalo emzini wakhe
Uma une igumbi ezisele futhi indlu yangasese, futhi awukhathali yini ekhaya sakho siyawuba sihambi, ungakwazi imali ngokuqasha emzini wabo, kwaba ingxenye yakhe. Abavakashi uyohlale funa embhedeni ukhululekile futhi sokudla ekuseni, ikakhulu uma ucabangela iqiniso lokuthi izivakashi ungathandi ukuhlala emahhotela. ikhaya lakho, yebo, kuyoba sikhange ngokwengeziwe kubantu ezisebenza nabo kuka ezingezona ezemvelo kakhulu futhi stylish izihambi amakamelo. Abanikazi akuzona onyakeni wokuqala uyisebenzisa futhi isandla phezu ingxenye ezingenalutho ekhaya lakho, ukunikela abahambi iholidi esimweni ngemfudumalo nangobungane.
Market yomlimi: Thengisa imikhiqizo yakho siqu
Uma uke waba emakethe kubalimi, ungabona bona yeka ukuthi kukhanga kangakanani okuningi bheka laphaya izithelo nemifino uma kuqhathaniswa nalabo olunikezwa ezinkulu. Akuwona wonke umuntu uyakwazi ukufeza umphumela ezifanayo ukulima, kodwa uma lesi sipho, futhi sikhule eziningi izithelo, imifino noma amakhambi, ungasebenzisa lezi amakhono imali eyengeziwe.
Yezandla kanye nobuciko bakhona: ukuthengisa ngobuhlakani bakho
Uma wazi ukuthi ukudala izinto ezinhle, uzalwa esikhathini ilungelo lokwenza imali umxhwele ngaphandle kokushiya ekhaya. Ukuthandwa yezandla vintage bukhula futhi engabonisi zimpawu ingasheshi le nqubo. Ngaphezu kwalokho, i-Inthanethi igcwele zezindawo lapho ungakwazi ukuthengisa yezandla zakho.
Call izikhungo: ukuthengisa isikhathi sabo futhi izwi
Uma une "Ifoni" izwi elihle, ikhono ngokushesha ahlele ulwazi, futhi endaweni ethule ekhaya lakho, ungathola imali ngokusebenza esikhungweni call. Kusho ukuthini lokhu olimele? izikhungo Call ngamasevisi zabo amafemu ukuthi akudingeki ongashadile ababekwazi ukuwuphendula ifoni usuku lonke nobusuku. Izingcingo athunyelwa call centre, bese idluliselwe abantu abasebenza ekhaya. Lezi zisebenzi babe ikhompyutha ne-software adingekayo, ukunikeza usizo uchwepheshe bese uphendula yonke imibuzo yamakhasimende.
Abathungela futhi elungisa: ukuthengisa izandla zabo
Uma ungakwazi thunga, une lokuzikhethela eziningi ongakhetha. Cabanga nje ngalokho onjani amasevisi unganikeza, uma une emakhono lafanele. Ungakwazi ukulungisa imiklamo izingubo, ungakwazi thunga ingubo yomshado, izingubo siko ezenziwe futhi ifomu. Ungenza izikhwama, izingubo zokulala, ocingweni lokuzenzela futhi imicamelo ukubandakanya Upholstery. Ungase futhi iphawule izinto ezikhethekile kakhulu, ezifana ezihlalweni ekhethekile for izikebhe kanye yezikebhe.
Yamadivayisi Library: ukuthengisa khona amabhuku wakho elidala
Abantu abaningi ngisho nokuwabona ukuthi banayo ekhaya kuyinto eshisiwe esikhulu, okungekho bengasebenzisi. Iqiniso lokuthi kukhona abantu abahola bephila ngokulima kabusha izincwadi. Bathenga izincwadi ezindala abantu ezahlukene, bese Resell kubo kwi-inthanethi. Kungani nawe ungenza okufanayo? Ngisho noma ungafuni ukuya endlini ngendlu sibuza ukuthi kungenzeka ukuthenga incwadi, ungakwazi ukuthengisa okungenani lezo kakade ekhaya lakho. Yiqiniso, uma awudingi, ngoba abanye abantu ukuqoqa izincwadi kanye nomtapo ekhaya kubo kubaluleke kakhulu.
Consulting: ukuthengisa ulwazi lwakho
Consultants ngamasevisi noma iseluleko ngemali ethile. Ngokwesibonelo, ungakwazi ukusiza entsha engenzi nzuzo ukwakha uhlelo ukuqoqa izimali, futhi esikhathini esizayo ukulawula inqubo. Noma ungasiza inkampani entsha ukuze zidonse ukunaka yabasebenzisi inethiwekhi, kanye abezindaba ukunakwa. Ungakwazi ukubhala emaphepheni yenkampani, bese ukuzisabalalisa ngokusebenzisa imigudu efanele. Abantu futhi usebenzise amasevisi consultants. Abanye abantu ujike consultants iseluleko emkhakheni wezimali noma emkhakheni intela, kuyilapho abanye ukhokhe ochwepheshe ukufunda ukuze kwezulu izitshalo engadini kanye waqhubeka enakekela kubo.
umbhalo Medical: ukuthengisa amakhono akho computer
Uma wazi kanjani ukusebenzisa ikhomphyutha ezingeni eliphezulu kakhulu futhi kusheshe ukuphrinta, ungakwazi futhi ukusebenza ekhaya, ukwenza umbhalo wezokwelapha. Odokotela abenza amanothi umsindo mayelana iziguli zakhe, bedinga umuntu okwazi incazelo yalezi amarekhodi, bese uwabeke ngezinhla ezingamaqoqo ezifanele amafayela nesineke. Nokho, odokotela abaningi abafuni ukukhokha amaholo egcwele onguchwepheshe ethile. Esikhundleni salokho, ukukhokhela umsebenzi owawenziwa ochwepheshe ezizimele, futhi kungcono yithuba elihle imali, ikakhulukazi uma ukuphrinta okusheshayo hhayi kuphela, kodwa futhi okuhle ngaso imithi, futhi wazi wonke amagama anzima.
Riga imbali emakethe izipesheli